कसरी गर्ने त दाँतको हेरचाह ?
रोचक कसरी गर्ने त दाँतको हेरचाह ?
कहिलेकाही दाँतमा विभिन्न खाले समस्या देखा परेर सताउने गर्छ । दाँतमा कुनै समस्या आएमा देखाएर हिड्न पनि लाज हुन्छ । दाँतले मानिसको सुन्दरतामा फरक पार्ने हुनाले यसको सुरषा गर्नु निकै जरुरी छ ।
दाँतको काम खाना चपाउनु मात्र होइन अन्य धेरै काम गर्छ ।
त्यसैले यसलाई जोगाउनुपर्दछ । दाँतलाई बिभिन्न समस्याबाट जोगाउन बिभिन्न घरेलु उपायहरु पनि छन् । दाँत माझ्नु परेमा नरम र सफा ब्रसको प्रयोग गनुृपर्दछ । खानाअघि र पछि नियमित ब्रस गर्नुपर्छ ।
दाँत माझ्दा तलमाथि, दायाँबायाँ गरी राम्रो सँग ३ मिनेटसम्म माझ्नुपर्छ ।
दाँतमा केही अल्झिएमा कुनै छेस्को प्रयोग गर्नुहुदैन । अत्यधिक पदार्थ पनि सेवन गर्नुहुँदैन । चकलेट वा गुलियो खानेकुरा पनि धेरै खानुहुँदैन । कुनै कडा बस्तु टोक्नु पनि हुँदैन । खाना वा खाजा खाइसकेपछि मुख कुल्ला गरेर अड्केको निकाल्नुपर्छ ।
दाँतमा सामान्य दुखाइ भएमा नुनपानीले मुख कुल्ला गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो घर वरीपरी सजिलै पाइने पुदिना निकै उपयोगी छ । सजिलै उम्रने पुदिना औषधीय गुणले भरीपुर्ण हुन्छ । यसका विभिन्न रोग निवारण गर्ने क्षमता हन्छ ।